I-Great Wind Wind, 1839
I-Freak Storm Ngoko abantu abangazikhunjulwayo Bahlala Bakho NgezoBomi
Kwiindawo ezisemaphandleni zase-Ireland zasekuqaleni kwe-1800s ukubikezela kwezulu kwakungekho nto ecacileyo. Kukho iintlobo ezininzi zabantu abaye bahlonishwa kwendawo ukuba baxelele ngokuchanekileyo ukujika kwimozulu. Nangona kunjalo ngaphandle kwenzululwazi ngoku sithatha ngokungavumelekanga, iziganeko zemozulu zavame ukujongwa kwi-prism yeenkolelo-ze.
Esinye isiqhwithi ngo-1839 sasiyinto eqhelekileyo yokuba abantu basemaphandleni basentshonalanga ye-Ireland, bemangaliswa ngumoya walo, babesaba ukuba kunokuphela kwehlabathi.
Abanye bathi i-"fairies," kunye neengcamango eziqingqiweyo ezivela kumcimbi.
Abo bahlala nge "Big Wind" abazange balibale. Kwaye ngenxa yesizathu eso siqhwithi esibuhlungu saba yiminyaka emashumi asixhenxe, umbuzo odumile owenziwe ngabalawuli baseBrithani ababusa iIreland.
I-Storm Great ihlasela iIreland
Iqhwa lawela e-Ireland ngoMgqibelo, ngoJanuwari 5, 1839. Ngeveki kusasa kwavela isembozo sefu esabonakala esibhakabhakeni saseIreland ebusika. Loo suku wawushisa ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo, kunye nekhephu ukususela ngobusuku ngaphambi kokuqala ukuncibilika.
Ngemini yemini yaqala ukuna kakhulu, kwaye imvula eyayivela ngasentla ye-Atlantic yancama ngokusasa empumalanga. Ngethuba lobusuku umoya omkhulu waqala ukulila. Kwaye ngeSonto ebusuku ubushushu obungenakulibaleka bukhutshwe.
Iqhwithi lomoya womoya lwaqala ukubetha entshonalanga nakumntla weIreland njengesiqhwithi esikhulu esasikhupha eAtlantic. Ngenxa yobuninzi bobusuku, kwada kwangaphambi kokuntwela kokusa, iimoya zavutha iindawo zasemaphandleni, zahlutha imithi emikhulu, yaqhawula uphahla izindlu kunye neenqwelo kunye neengqungquthela zesonto.
Kwakukho neengxelo ukuba ingca yachithwa kwiinduli.
Njengoko inxalenye enkulu kakhulu yesibetho senzeke kwiiyure emva kobusuku, iintsapho zixakeke ebumnyameni obumnyama, zitywantyiswa yimimoya yokukhawuleza kunye nokuvakala komonakalo. Amanye amakhaya abanjwe ngomlilo xa iimoya ezinqabileyo zityhutyha izitshixo, ziphosa ezifudumeleyo kwiindawo zokuhlala.
Ukulimala kunye nokulimala
Iingxelo zepapasho zithi abantu abangaphezu kwama-300 babulawa kwisiqhwithi somoya, kodwa kunobunzima ukuchithwa manani. Kukho iingxelo zezindlu eziwa phantsi kwabantu kunye nezindlu ezivuthayo emhlabeni. Akungathandabuzeki ukuba kukho ukulahleka kokuphila kunye nokulimala amaninzi.
Amawaka amaninzi ayengenamakhaya, kwaye ukuxhatshazwa kwezoqoqosho okwakubangelwa ngabantu abahlala bejongene nendlala bekumele kube nzima. Izitoro zokutya ezazibhekiselele ekupheleni kwebusika zachithwa zaza zahlakazeka. Ibhokhwe kunye neegusha zabulawa ngamanani amaninzi. Izilwanyana zasendle kunye neentaka nazo zabulawa, kwaye i-crows kunye ne-jackdaws zaziphantse ziphele kwezinye iindawo zelizwe.
Kwaye kufuneka kugcinwe engqondweni ukuba isithwathwa sabetha ngexesha elithile ngaphambi kokuba iinkqubo zenkqubo zenkqubo zentlekele zikho. Abantu abachaphazelekayo bekufuneka bazibophezele.
I-Wind Wind In Tradition
I-Irish yolwimi yayikholelwa "kubantu," into esicinga ngayo namhlanje njengama- leprechauns okanye ama-fairies . Kwaye isithethe sathi umkhosi womthendeleko othile, uSaint Ceara, owawubanjwe ngoJanuwari 5, wawunjalo xa ezi zinto zendalo zingabamba intlanganiso enkulu.
Njengoko isiphepho esinamandla sashaya iIreland ngosuku olulandelayo emva komthendeleko weSaint Saint, isiko lokubhala ibali laphuhliswa ukuba abantu besizwe babamba intlanganiso yabo enkulu ngobusuku kaJanuwari 5, baza banquma ukuhamba e-Ireland.
Njengoko beshiya ubusuku obulandelayo, badala "Umoya Okhulu."
Abakwa-bureaucrats basebenzisa i-Big Wind njengeyona nto ibalulekileyo
Ubusuku bukaJanuwari 6, 1839 bukhunjulwa kakhulu kangangokuthi yayisoloko iyaziwa eIreland njenge "Umoya Omkhulu," okanye "Ubusuku Bomoya Omkhulu."
Incwadi yenkcazo eyashicilelwe ekuqaleni kwekhulu lama-20 yathi: "Ubusuku boMoya omkhulu". "Izinto zivela kuyo: into enjalo kwaye kwenzeka into enjalo" ngaphambi kokuba kuqhutywe umoya omkhulu, xa ndiyinkwenkwe. "
I-quirk yesiko lase-Irish kukuba imihla yokuzalwa yayingakaze ibhiyozwe ngekhulu le-19, kwaye akukho nxaxheba ekhethekileyo eyanikezwa ngokucacileyo ukuba umntu ubudala kangakanani. Iirekhodi zokuzalwa zazihlala zingagcinwa ngokucophelela ngamagosa karhulumente.
Oku kubangela iingxaki kubanikazi bamazalamhla namhlanje (obani ngokubanzi bafanele bathembele kwiirekhodi zebharisti zebhaptizi). Kwaye kwadala iingxaki kubalawuli bama-ofisi ekuqaleni kwekhulu lama-20.
Ngomnyaka we-1909 urhulumente waseBrithani, owawusoloko elawula i-Ireland, wamisa inkqubo yeepensheni ezigugile. Xa sisebenzisana nabemi base-Ireland basekhaya, apho iirekhodi ezibhaliweyo zingaba zininzi, isiphepho esinamandla esasuka kwi-Atlantic kwiminyaka engama-70 ngaphambili sasiyiluncedo.
Enye ye mibuzo ebuzwe ngabantu asebekhulile kukuba ukuba bayayikhumbula "Umoya Okhulu." Ukuba babenako, bafanelekele umhlala-phantsi.
I-Wave entsha kwi-MMA yiCandelo loQeqesho lweNgqondo
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: I-Ballare